Virtualization မှတ်စုတို အပိုင်းအစများ အပိုင်း(၂) - BIM Trainings
Apr 24, 2017 | Posted by	kozeyar | Uncategorized	|
vSphere VMware Licensing ကို vSphere enviroment အပိုင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ ရှိနိူင်ပါသည်။
အထက်ပါဖော်ပြခဲ့တာတွေက license အမျိုးအစားများသာဖြစ်ပြီး အကယ် သာ မိမိ vSphere environment မှာ Virtual Machineအရေအတွက် များလာခဲ့လျှင် VMware ရဲ့ vSphere with Operation Management (VSOM) ကိုအသုံး ပြုဖို့ အကြံပြုပါတယ် ဘာကြောင့်အသုံးပြုသင့်လဲဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ vSphere Operation Management ကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း အောက်ပါအတိုင်း အတိုင်း License စသဖြင့် တွေ့ ရှိနိူင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
VMware vSphere Acceleration Kits Standard with vSOM
VMware vSphere Acceleration Kits Enterprise Plus with vSOM
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ License Type တွေကို VMware သက်ဆိုင်ရာ Partner သို့ မဟုတ် Reseller တွေ ထံမှသာ ၀ယ်ယူရရှိနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ VMware ကနေ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းတော့ မြန်မာနိူင်ငံမှာ ရရှိနိူင်မှာ မဟုတ်သေးပါဖူး။ မြန်မာနိူင်ငံမှာ ရှိတဲ့Business အသီးသီးမှာရှိနေကြတဲ့ IT industrial အတွင်းမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ညီငယ် / ညီမ ငယ်များ နှင့် အကို များတွက်သာ မက Managenment အပိုင်းမှာ တာဝန်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ Senior Level အထက်ပိုင်းများအတွက်ကို မိမိ Organization အတွက် Product licensing knowledge အပိုင်းကိုပါရရှိစေချင်ပါတယ်။ သို့ မှသာ မိမိ Organization သာမက ဆက်စပ်လျက်ရှိသော Business များအတွက် IT Budget သက်မှတ်ပေးရာမှာ အထောက်အကူပြုနိူင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မိမိ Organization ရဲ့Data Center ကို Virtualization Technology သုံပြီး Compute ,Storage နှင့် Network စနစ်များကို Consolidation လုပ်ချင်တဲ့အခါ ကိုယ့် Organization ရဲ့လက်ရှိ size အခြေနေ၊ IT Budget ၊ ဥပမာအားဖြင့် နောက် ထက် ၅ နှစ်အတွက် တိုးတက်လာမည့်Business size အခြေနေ နှင့် လက်လျောညီထွေရှိမည့်IT Infra စသော အခြေနေ တွေကို သုံးသက်ပြီး ဘယ် Vendor ရဲ့ Product ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရပါလ်ိမ့် မည်။ ယခုပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် VMware vSphere environment အကြောင်းပြောနေတော့ သူနဲ့ ပက်သက်တဲ့ License ပြောပါ့မည်။
VMwware အနေဖြင့် သူရဲ့ Customer တွေကို License ရောင်းတဲ့ အခါ Physical Server မှာ Install လုပ်ထားတဲ့ CPU socket အရေအတွက် ပေါ်မူတည်ပြီး Per CPU အနေဖြင့် ရောင်းပါတယ်။ ဥပမာ အနေဖြင့် မိမိ Data Center မှာ ရှိတဲ့Server Firm ထဲမှာ ရှိတဲ့Physical Host (ESXi Server)4လုံးအတွက် VMware License ၀ယ်မယ်လို့ ဆိုကြပါစို့ ။ ဒီအချိန်မှာ မိမိရဲ့ Server မှာ CPU sockect2ခုပါရှိတယ် သတ်မှတ်ကြပါစို့ဒီအချိန်မှာ VMware မှ license ၀ယ်ယူ အောက်ပါအတိုင်း ၀ယ်ယူရပါလိမ့်မည်။
ဥပမာ အနေဖြင့် VMware ဈေးနှုန်း တစ်ခုကိုနမူနာတွက်ချက်ပြပါ့မယ်
Per Host x Per CPU =4x2= 8 CPUs
Total CPU x Unit Price =8 CPUs x 400 U$D (ဥပမာအနေဖြင့်) = 3200 U$D ကျပါမည်
One vCenter instance standard = 1200 U$D
1 year Support and Subscription for VMware vSphere (8 unit) = 200 U$D x 8 = 1600 U$D
1 year contracts Support and Subscription for one vCenter instance = 350 U$D
အထက်ဖော်ပြခဲ့တာကတော့ ဈေးကွက်မှာ အတွင်းရှိနေတဲ့Real Price မဟုတ်ပါဖူး ဥပမာ အနေဖြင့်သာ price တစ်ခုကို နမူနာထားဖေါ်ပြခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ် ၍ သာ မိမိက vSphere license ကို Enterprise license အနေဖြင့်လိုအပ်လို့ ဝယ်ယူခြင်တယ်ဆိုရင် အထက်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ license type တွေ အတိုင်း ၀ယ်ယူရမှာ သတ်မှတ်တဲ့အတိုင်း ၀ယ်ယူနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ရင် စာဖတ်သူတွေအနေဖြင့် မိမိရဲ့ Organization တွေ VMware license ၀ယ်တဲ့ အခါ သိသင့်သိထိုက် အကြမ်းဖျဉ်း Knowledge တွေ သိရှိယူဆနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကတော့ VMware ကနေ Partner လုပ်ထားတဲ့ Company တွေကနေ အသေးစိတ် မေးမြန်းနိူင်ပါတယ်။ ဒီမှာပြသာနာတစ်ခုက ရှိသေးတယ် VMware license နှင့် 1 year Support and Subscription ၀ယ်ယူပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာ Customer အနေဖြင့် Support and Subscription တို့ ကို နှစ်တိုင်းဝယ်ယူဖြစ်ကြရပါတယ်။ ဒီအချိန်မျိုးမှာ customer အချို့ က Support and Subscription ကို ထပ်မ၀ယ်ချင်ကြပါဖူး။ အကြောင်းက Virtualization ပြောင်းပြီး ၁နှစ်အတွင်းမှာ ဘာပြသာနာမှ မကြုံခဲ့လို့VMware ကနေ ရောင်းတဲ့ Support and Subscription ကို မ၀ယ်ချင်ကြပါဖူး။ ဒီနေရာမှာလည်း အကြုံပြုစရာလေးရှိပါတယ်။
VMware product ကို မိမိ organization အတွင်းမှာ အသုံးပြုနေချိန်တွင် ESXi Host, vCenter Server တို့ ရဲ့အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တွေ Management နဲ့Basic Troubleshooting တွေကိုတော့အနည်းဆုံးတော့ သိထားသင့်ပါတယ် ။အဲ့ဒီအခြေနေလေးတွေ သိထားမှသာ မိမိရဲ့ vSphere Environment မှာ ပြသာနာဖြစ်တဲ့ အချိန် အနည်းဆုံးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်း နိူင်မှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် VMware ရဲ့Support and Subscription ၀ယ်ယူထားခဲ့ ရင်တော့ VMware site ထဲမှာ Ticket ဖွင့်ပြီး VMware ရဲ့Global Support Team ကို ဖြေရှင်းဖို့ အကူအညီတောင်းလို့ ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက အခုလို Digitalization Business ကို Globally အနေဖြင့် အသုံးပြုနေတဲ့အခါ Organization အများစုက Virtualization Technologies တွေကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်ပိုင် Private Data Center တွေ ထားရှိကြသလို့အချို့ သော Business organization တွေမှာဆို Cloud Computing ကို အသုံးပြုနေကြတဲ့အခြေနေတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းက မိမိ organization မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Private Data ကို Public အဖြစ်ရော အသုံးပြုလာတဲ့အခါ Hybrid Cloud အနေဖြစ်ရော အသုံးပြုလာတာကို တွေ့ ရှိလာကြပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ Security product ထုတ်နေကြတဲ့ vendor တွေက လည်း ဥပမာအနေဖြင့် Trend micro ရဲ့security solution တစ်ခုမှာဆို ရင် Deep Security Product တစ်ခုကို Market မှာ စတင်ရောင်းချနေပါပြီ။ သူ့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုက Hypervisor တစ်ခုတည်းမှာ installation လုပ်ထားပြီး သူ့ အပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ Guest OS တွေမှာ Agent ထားပြီး policy driven လုပ်ပြီး Manage လုပ်ပါတယ်။
ကဲ …..ကဲ….. ပြောချင်တာ တွေ များသွားတော့Security ဘက်က Product အကြောင်းပါရောက်သွားတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက VMware ရဲ့Support and Subscription က ဘာမှ မဖြစ်သေးတော့ အသုံးမလိုဖူးလို့အလျင်စလို မဆုံးဖြတ်စေချင်ပါဖူး။ အကယ်၍ မိမိ Data Center ရဲ့Hypervisor Level မှာ security breach violation တစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုကြဆို့‘ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ကလည်း Support and Subscription မ၀ယ်ထားမိဖူး မိမိရဲ့ organization မှာလည်း ဒီ issue ကို ဖြေရှင်းပေးနိူင်မဲ့Expert Level လည်းရှိမနေခဲ့ဖူးဆိုရင် အခက်အခဲများစွာရှိနိူင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေနေကို ကြိုတင်စဉ်းစားထားတာက မိမိ organization ရဲ့ business အသက်သွေးကြောက digitization ပေါ်မှာ ဘယ်လောက် အမှီသဟဲပြုနေသလဲဆိုတာ တိုင်းတာ သတိချပ်သင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုက ခုနပြောသွားတဲ့ vmware site မှာ Ticket ဖွင့်ပြီး ဖြေရှင်းလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းကိုပြောချင်ပါတယ် ။Vmware vSphere product ၀ယ်တဲ့customer တိုင်း myvmware.com ထဲမှာ ID တစ်ခုနဲ အောက်ပါအတိုင့်း login ၀င်လို့ ရပါတယ်။
Step (1) ……… https://my.vmware.com/web/vmware/login
Step (2) ……… https://my.vmware.com/group/vmware/home
အထက်ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အဆင့်ဆင့်က Support and Subscription ၀ယ်ထားပြီး vmware မှာ ဖြစ်တဲ့ issue အမျိုးအစားခွဲ ခြားပြီး ticket ဖွင့် ဖြေရှင်းခိုင်းနိူင်ပါတယ်။လိုအပ်လာခဲ့ရင် VMware ရဲ့Global Support Team မှ မိမိအား ဖုန်းတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုပေးပါတယ် support က 24/7 ရပါတယ် ဆက်လက်ပြီး vSphere license အမျိုးအစားပေါ်မူတည် ပြီး ရတဲ့ feature တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကို ပြောကြရအောင်…….
ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် vSphere Essential Kit Plus အကြောင်းစပြောကြရအောင်
vSphere Essential Plus အကြောင်းမပြောခင်မှာ သူ့ အရှေ့ မှာ vSphere Essential edition တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ သူ့ အကြောင်းကို license တစ်ခုအနေဖြင့် မပြောလိုတော့ပါဖူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့VMware ရဲ့ အဓိက features တွေ ဖြစ်တဲ့HA functionality,Data recovery,vMotion တွေကို vSphere Essential support မပေးပါဖူး။ ဒါကြောင့်မို့ အခု vSphere Essential Kit Plus အကြောင်းဘဲ စတင်ပြောပါတော့မယ်……………….
vSphere Essential Kit Plus ကို Smaller Environments အတွက်သာ အဓိက ရည်ရွယ်ပြီး အသုံးပြုဖို့ VMware အကြံပြုထားပါတယ်။ အောက်ပါအချက်အလက်များကို ကြည့် ပြီး ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။
Items Feature Essentials Plus
1 Phys. RAM limit Host limit 12TB
2 vCenter Server compatibility vCenter Server for Essentials (up to3physical servers)
3 Licenses For3physical servers (max.2processors per server)
4 vCPU limit 128
5 vCenter Server for Essentials Agent Yes
6 Update Manager Yes
7 HA functionality Yes
8 vMotion Yes
9 vSAN Yes, optional
10 Upgradeable? Yes
ကျန်တဲ့ Standard, Enterprise, Enterprise Plus နှင့် Operation Management အကြောင်းကိုတော့Virtualization မှတ်စုတို အပိုင်းအစများ အပိုင်း(၃) မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါ့မည်။
vSphere VMware Licensing ကို vSphere enviroment အပျိုငျးမှာ အောကျပါအတိုငျးတှေ့ ရှိနိူငျပါသညျ။
အထကျပါဖျောပွခဲ့တာတှကေ license အမြိုးအစားမြားသာဖွဈပွီး အကယျ သာ မိမိ vSphere environment မှာ Virtual Machine အရအေတှကျ မြားလာခဲ့လြှငျ VMware ရဲ့ vSphere with Operation Management (VSOM) ကိုအသုံး ပွုဖို့ အကွံပွုပါတယျ ဘာကွောငျ့အသုံးပွုသငျ့လဲဆိုတဲ့ အသေးစိတျကိုတော့ နောကျပိုငျးမှာ ဆကျလကျဖျေါပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ vSphere Operation Management ကို ၀ယျယူအသုံးပွုမယျဆိုရငျလညျး အောကျပါအတိုငျး အတိုငျး License စသဖွငျ့ တှေ့ ရှိနိူငျမညျဖွဈပါတယျ။
ဖျောပွခဲ့တဲ့ License Type တှကေို VMware သကျဆိုငျရာ Partner သို့ မဟုတျ Reseller တှေ ထံမှသာ ၀ယျယူရရှိနိူငျမှာဖွဈပါတယျ။ VMware ကနေ တိုကျရိုကျရောငျးခခြွငျးတော့ မွနျမာနိူငျငံမှာ ရရှိနိူငျမှာ မဟုတျသေးပါဖူး။ မွနျမာနိူငျငံမှာ ရှိတဲ့Business အသီးသီးမှာရှိနကွေတဲ့ IT industrial အတှငျးမှာ အလုပျလုပျကိုငျနကွေတဲ့ ညီငယျ / ညီမ ငယျမြား နှငျ့ အကို မြားတှကျသာ မက Managenment အပိုငျးမှာ တာဝနျလုပျကိုငျနကွေတဲ့ Senior Level အထကျပိုငျးမြားအတှကျကို မိမိ Organization အတှကျ Product licensing knowledge အပိုငျးကိုပါရရှိစခေငျြပါတယျ။ သို့ မှသာ မိမိ Organization သာမက ဆကျစပျလကျြရှိသော Business မြားအတှကျ IT Budget သကျမှတျပေးရာမှာ အထောကျအကူပွုနိူငျမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။
မိမိ Organization ရဲ့Data Center ကို Virtualization Technology သုံပွီး Compute ,Storage နှငျ့ Network စနဈမြားကို Consolidation လုပျခငျြတဲ့အခါ ကိုယျ့ Organization ရဲ့လကျရှိ size အခွနေေ၊ IT Budget ၊ ဥပမာအားဖွငျ့ နောကျ ထကျ ၅ နှဈအတှကျ တိုးတကျလာမညျ့Business size အခွနေေ နှငျ့ လကျလြောညီထှရှေိမညျ့IT Infra စသော အခွနေေ တှကေို သုံးသကျပွီး ဘယျ Vendor ရဲ့ Product ကို ရှေးခယျြမယျဆိုတာ စဉျးစားဆုံးဖွတျရပါလျိမျ့ မညျ။ ယခုပထမဦးဆုံးအနဖွေငျ့ VMware vSphere environment အကွောငျးပွောနတေော့ သူနဲ့ ပကျသကျတဲ့ License ပွောပါ့မညျ။
VMwware အနဖွေငျ့ သူရဲ့ Customer တှကေို License ရောငျးတဲ့ အခါ Physical Server မှာ Install လုပျထားတဲ့ CPU socket အရအေတှကျ ပျေါမူတညျပွီး Per CPU အနဖွေငျ့ ရောငျးပါတယျ။ ဥပမာ အနဖွေငျ့ မိမိ Data Center မှာ ရှိတဲ့Server Firm ထဲမှာ ရှိတဲ့Physical Host (ESXi Server)4လုံးအတှကျ VMware License ၀ယျမယျလို့ ဆိုကွပါစို့ ။ ဒီအခြိနျမှာ မိမိရဲ့ Server မှာ CPU sockect2ခုပါရှိတယျ သတျမှတျကွပါစို့ဒီအခြိနျမှာ VMware မှ license ၀ယျယူ အောကျပါအတိုငျး ၀ယျယူရပါလိမျ့မညျ။
ဥပမာ အနဖွေငျ့ VMware စြေးနှုနျး တဈခုကိုနမူနာတှကျခကျြပွပါ့မယျ
Total CPU x Unit Price =8 CPUs x 400 U$D (ဥပမာအနဖွေငျ့) = 3200 U$D ကပြါမညျ
အထကျဖျောပွခဲ့တာကတော့ စြေးကှကျမှာ အတှငျးရှိနတေဲ့Real Price မဟုတျပါဖူး ဥပမာ အနဖွေငျ့သာ price တဈခုကို နမူနာထားဖျေါပွခဲ့ခွငျးသာ ဖွဈပါတယျ။ အကယျ ၍ သာ မိမိက vSphere license ကို Enterprise license အနဖွေငျ့လိုအပျလို့ ဝယျယူခွငျတယျဆိုရငျ အထကျမှာ ဖျေါပွခဲ့တဲ့ license type တှေ အတိုငျး ၀ယျယူရမှာ သတျမှတျတဲ့အတိုငျး ၀ယျယူနိူငျမှာဖွဈပါတယျ။အခုလို ရငျ စာဖတျသူတှအေနဖွေငျ့ မိမိရဲ့ Organization တှေ VMware license ၀ယျတဲ့ အခါ သိသငျ့သိထိုကျ အကွမျးဖဉျြး Knowledge တှေ သိရှိယူဆနိုငျပါတယျ။ အသေးစိတျကတော့ VMware ကနေ Partner လုပျထားတဲ့ Company တှကေနေ အသေးစိတျ မေးမွနျးနိူငျပါတယျ။ ဒီမှာပွသာနာတဈခုက ရှိသေးတယျ VMware license နှငျ့ 1 year Support and Subscription ၀ယျယူပွီး တဈနှဈအကွာမှာ Customer အနဖွေငျ့ Support and Subscription တို့ ကို နှဈတိုငျးဝယျယူဖွဈကွရပါတယျ။ ဒီအခြိနျမြိုးမှာ customer အခြို့ က Support and Subscription ကို ထပျမဝယျခငျြကွပါဖူး။ အကွောငျးက Virtualization ပွောငျးပွီး ၁နှဈအတှငျးမှာ ဘာပွသာနာမှ မကွုံခဲ့လို့VMware ကနေ ရောငျးတဲ့ Support and Subscription ကို မဝယျခငျြကွပါဖူး။ ဒီနရောမှာလညျး အကွုံပွုစရာလေးရှိပါတယျ။
VMware product ကို မိမိ organization အတှငျးမှာ အသုံးပွုနခြေိနျတှငျ ESXi Host, vCenter Server တို့ ရဲ့အခွခေံလုပျဆောငျခကျြတှေ Management နဲ့Basic Troubleshooting တှကေိုတော့အနညျးဆုံးတော့ သိထားသငျ့ပါတယျ ။အဲ့ဒီအခွနေလေေးတှေ သိထားမှသာ မိမိရဲ့ vSphere Environment မှာ ပွသာနာဖွဈတဲ့ အခြိနျ အနညျးဆုံးတော့မိမိကိုယျတိုငျဖွရှေငျး နိူငျမှာပါ။ ဒါမှမဟုတျ VMware ရဲ့Support and Subscription ၀ယျယူထားခဲ့ ရငျတော့ VMware site ထဲမှာ Ticket ဖှငျ့ပွီး VMware ရဲ့Global Support Team ကို ဖွရှေငျးဖို့ အကူအညီတောငျးလို့ ရပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ပွောခငျြတာက အခုလို Digitalization Business ကို Globally အနဖွေငျ့ အသုံးပွုနတေဲ့အခါ Organization အမြားစုက Virtualization Technologies တှကေို အသုံးပွုပွီး ကိုယျပိုငျ Private Data Center တှေ ထားရှိကွသလို့အခြို့ သော Business organization တှမှောဆို Cloud Computing ကို အသုံးပွုနကွေတဲ့အခွနေတှေလေညျးရှိကွပါတယျ။ ဆိုလိုရငျးက မိမိ organization မှာ အသုံးပွုထားတဲ့ Private Data ကို Public အဖွဈရော အသုံးပွုလာတဲ့အခါ Hybrid Cloud အနဖွေဈရော အသုံးပွုလာတာကို တှေ့ ရှိလာကွပါပွီ။ ဒီအခြိနျမှာ Security product ထုတျနကွေတဲ့ vendor တှကေ လညျး ဥပမာအနဖွေငျ့ Trend micro ရဲ့security solution တဈခုမှာဆို ရငျ Deep Security Product တဈခုကို Market မှာ စတငျရောငျးခနြပေါပွီ။ သူ့ ရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတဈခုက Hypervisor တဈခုတညျးမှာ installation လုပျထားပွီး သူ့ အပျေါမှာ ရှိနတေဲ့ Guest OS တှမှော Agent ထားပွီး policy driven လုပျပွီး Manage လုပျပါတယျ။
ကဲ …..ကဲ….. ပွောခငျြတာ တှေ မြားသှားတော့Security ဘကျက Product အကွောငျးပါရောကျသှားတယျ။ ဆိုလိုခငျြတာက VMware ရဲ့Support and Subscription က ဘာမှ မဖွဈသေးတော့ အသုံးမလိုဖူးလို့အလငျြစလို မဆုံးဖွတျစခေငျြပါဖူး။ အကယျ၍ မိမိ Data Center ရဲ့Hypervisor Level မှာ security breach violation တဈခုခုဖွဈလာခဲ့မယျဆိုကွဆို့‘ဒီအခြိနျမှာ ကိုယျကလညျး Support and Subscription မဝယျထားမိဖူး မိမိရဲ့ organization မှာလညျး ဒီ issue ကို ဖွရှေငျးပေးနိူငျမဲ့Expert Level လညျးရှိမနခေဲ့ဖူးဆိုရငျ အခကျအခဲမြားစှာရှိနိူငျပါတယျ။ ဒီလိုအခွနေကေို ကွိုတငျစဉျးစားထားတာက မိမိ organization ရဲ့ business အသကျသှေးကွောက digitization ပျေါမှာ ဘယျလောကျ အမှီသဟဲပွုနသေလဲဆိုတာ တိုငျးတာ သတိခပျြသငျ့ပါတယျ။
နောကျဆုံးတဈခုက ခုနပွောသှားတဲ့ vmware site မှာ Ticket ဖှငျ့ပွီး ဖွရှေငျးလို့ ရတယျဆိုတဲ့ အပိုငျးကိုပွောခငျြပါတယျ ။Vmware vSphere product ၀ယျတဲ့customer တိုငျး myvmware.com ထဲမှာ ID တဈခုနဲ အောကျပါအတိုငျ့း login ၀ငျလို့ ရပါတယျ။
အထကျဖျေါပွခဲ့တဲ့ အဆငျ့ဆငျ့က Support and Subscription ၀ယျထားပွီး vmware မှာ ဖွဈတဲ့ issue အမြိုးအစားခှဲ ခွားပွီး ticket ဖှငျ့ ဖွရှေငျးခိုငျးနိူငျပါတယျ။လိုအပျလာခဲ့ရငျ VMware ရဲ့Global Support Team မှ မိမိအား ဖုနျးတိုကျရိုကျချေါဆိုပေးပါတယျ support က 24/7 ရပါတယျ ဆကျလကျပွီး vSphere license အမြိုးအစားပျေါမူတညျ ပွီး ရတဲ့ feature တဈခုခငျြးစီအကွောငျးကို ပွောကွရအောငျ…….
ပထမဦးဆုံးအနဖွေငျ့ vSphere Essential Kit Plus အကွောငျးစပွောကွရအောငျ
vSphere Essential Plus အကွောငျးမပွောခငျမှာ သူ့ အရှေ့ မှာ vSphere Essential edition တဈခုရှိပါသေးတယျ။ သူ့ အကွောငျးကို license တဈခုအနဖွေငျ့ မပွောလိုတော့ပါဖူး ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့VMware ရဲ့ အဓိက features တှေ ဖွဈတဲ့HA functionality,Data recovery,vMotion တှကေို vSphere Essential support မပေးပါဖူး။ ဒါကွောငျ့မို့ အခု vSphere Essential Kit Plus အကွောငျးဘဲ စတငျပွောပါတော့မယျ……………….
vSphere Essential Kit Plus ကို Smaller Environments အတှကျသာ အဓိက ရညျရှယျပွီး အသုံးပွုဖို့ VMware အကွံပွုထားပါတယျ။ အောကျပါအခကျြအလကျမြားကို ကွညျ့ ပွီး ဆကျလကျဆှေးနှေးပါ့မယျ။
ကနျြတဲ့ Standard, Enterprise, Enterprise Plus နှငျ့ Operation Management အကွောငျးကိုတော့Virtualization မှတျစုတို အပိုငျးအစမြား အပိုငျး(၃) မှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားပါ့မညျ။